NanịSignSign - Ekwentị Mbinye aka Kọmputa - ngwa ngwa ma dịkwa nchebe
Kedu ka SimplySign si arụ ọrụ?
Ọ bụ azụmahịa gị iji mee ka ọ dị ngwa ma dịkwa nchebe
Dị Mfe, adaba na akụ na ụba
mbinye aka nke ekwentị
Ngwá ọrụ ọrụ ọgbara ọhụrụ
N'ime ụwa azụmahịa
oge ọ bụla agụta
NanịSSS ga-agbanwe smartphone gị ka ọ bụrụ ngwaọrụ ọrụ ọgbara ọhụrụ, ekele nke ị nwere ike ịbanye ngwa ngwa ọ bụla dabara adaba iji gosi na ị na-edebanye aka na aka gị. Nke a bụ ọrụ mbụ nke ụdị a enyere n'ahịa Polish
Na-arụ ọrụ na Smartphone / Mbadamba ụrọ / PC
Na-arụ ọrụ na-enweghị kaadị nkịtị
Na-arụ ọrụ na ọtụtụ nyiwe Windows / macOS / Android / iOS
Akwụkwọ edemede ekwentị
Dakọtara na aturerịba ama eP kpochapụwo
Nyocha ahịa siri ike
Ike ijikọ site na iji API
na-akpaghị aka na ngwanrọ Adobe n'ụwa niile!
Kwadebere maka imekọrita na usoro ọfịs na nchịkwa
Nkwado maka ngwa ahịa isi: (dịka ọmụmaatụ sistemụ Payer / e-Declarations)
site na Adobe
Mee ọ rụọ ọrụ
KPATARA / GHARA
Maka ngwaọrụ ọ bụla na-enweghị onye na-agụ ya na kaadị
Mbinye aka gị pụrụ iche, nke nzuzo
ọ nọghị nke ọma
Nanị SimSS ga-atụgharị ama gị ka ọ bụrụ ngwa ọrụ ọrụ ọgbara ọhụrụ. Ọhụrụ - mbinye aka ruru eru nke na-arụ ọrụ na-enweghị kaadị a na-ahụ anya na onye na-agụ ya, na ngwaọrụ mkpanaka na kọmputa kọmputa kpochapụwo.
Na-arụ ọrụ kwekọrọ na isi ọrụ
Enwere ike iji ndị na-akwụ ụgwọ ZUS nweta SimplSign akwụkwọ ruru eru ịbanye nkwupụta, iziga e-Nkwupụta ma ọ bụ JPK rubere ZUS, mgbe ọ bụla mechiri nkwekọrịta iwu obodo, ịbanye na akwụkwọ ọnụahịa elektrọn.
Ohere nke iwekota iji API
Ntinye site na iji API, ekele nke ị nwere ike jikọọ sistemụ IT nke gị n'otu mpaghara nke itinye akara aka na akara elektrọnik ruru eru - iji otu pịa. (Ngwunye ihe mmemme na ntanetị na ntanetị na-enye ohere ka ndị ọzọ kwurịta okwu.)
Nyocha 2-siri ike
Nyocha nke abụọ-pụtara na iji paswọọdụ nke ihe ị mara yana akụkụ nke abụọ nke ihe ị ga - abanye. Onye ọrụ na-abanye n'ime site na ịbanye paswọọdụ, soro ọnụọgụ nọmba na - eme maka otu ụbọchị na oge. A na-abanye ndị ahịa mgbe akara paswọọdụ na eriri.
Izipu dọkụmentị na Internetntanetị dị ezigbo ọnụ, adaba ma chekwaa oge gị. A na-enyefe akwụkwọ ndị a n'enweghị ihe ịchọrọ ma ị ga-enweta nkwenye gọọmentị maka nnata.
Iji ọrụ e-mail bụ ụzọ pụtara ìhè iji melite ọrụ ụlọ ọrụ. Ndepụta nke omume na oru ndị enwere ike ịgwọ gị n'ịntanetị na-abawanye mgbe niile. A ga-echezọ itinye akara, idechi, mbupu ya na ego ole ọ ga-echezọ. -Debanye aha ga - enyere gị aka ịmechaa ụlọ ọrụ ndị dị mkpa na - ahapụghị ụlọ.
A na-enyefe akwụkwọ ndị a n'enweghị ihe ịchọrọ ma ị ga-enweta nkwenye gọọmentị maka nnata. akwụkwọ nwere akara e-sign nwere ikike iwu dị ka a ga-asị na ejiri aka debanye ya n’akwụkwọ. 128-256 bit encryption data na-echebe gị na ndị ahịa gị na nnabata data.
Nzọụkwụ asatọ iji nwee ihe ịga nke ọma
A ga-echezọ akara, mechiri emechi, mbupu ya na ụgwọ ya ga-echefu
Ntanetị dị mkpa na-eme ka ndị ọrụ nkwekọrịta na-emekọ ihe ọnụ, ntinye akwụkwọ e-ede ga-enye gị ohere ịmechaa ọrụ dị mkpa na-enweghị ịhapụ ọfịs gị.
Naanị jiri akara elektrọnik wee dozie okwu ahụ naanị n'ime nkeji ole na ole!
Ọ na-azọpụta gị oge. Mbipụta, ntinye akwụkwọ ntuziaka na ịbịanye aka n'akwụkwọ abaghị uru.
Anyi kachasi nma nke asambodo nile enyere enyere gi.
Na-egosi nkwenye zuru ezu. Ọrụ ndị enyere dị kwekọrọ n’usoro ụwa dum.
Asambodo ahụ ga - agba mbọ chebe akụ na ihe onyonyo nke ụlọ ọrụ gị. Nke a na - enyere ntụkwasị obi dị elu
A na-enyefe akwụkwọ ndị a n'enweghị ihe ịchọrọ ma ị ga-enweta nkwenye gọọmentị maka nnata.
Akwụkwọ tozuru oke gụnyere na ọrụ SimlySign (nke ziri ezi: afọ 1 ma ọ bụ afọ abụọ) na-arụ ọrụ dị ka ọrụ niile dị n'ahịa si dị, ya mere enwere ike iji ya:
site na ndị na-akwụ ụgwọ ZUS iji banye nkwupụta a
maka izipu e-Nkwupụta ma ọ bụ JPK bufere Officelọ Ọrụ Maka Taxtụ Isi
na njedebe njedebe nke nkwekọrịta iwu obodo
iji banye akwụkwọ ọnụahịa eletriki
na-edobe akwụkwọ na Appelọ Mkpegharị Mba (National Chamber of Appeal)
na-ekpesa arịrịọ n'ụlọ ikpe
na-edobe ngwa na inweta nnweta na National Court Register
ndakọrịta na GIODO (Onye nyocha General maka Nchedo Data nkeonwe)
na-enyefe ihe nkwupụta e-kwuputara na UFG (Insurance Guarantee Fund)
mmekorita ya na ụlọ ọrụ nchịkwa ọha
mmechi iwu obodo dị n'ụdị elektrọnik
isonye na uzo ahia elektrọnik na ihe ncheta
Nkwukọrịta n'ime ikpo okwu ePUAP (Ọrụ Plato nke Ọrụ Nlekọta Ọha)
Nke a bụ ọrụ mbụ ụdị a enyere n'ahịa Polish, nke:
Na-arụ ọrụ na-enweghị kaadị nkịtị na onye na-agụ ihe,
Ọ na-enye aka ịbanye e-Dọkụmentị n'ịntanetị 24/7 n'oge ọ bụla, site na ebe ọ bụla n'ụwa,
Na-arụ ọrụ na ma ngwaọrụ mkpanaaka (gam akporo na iOS) na kọmpụta klas (PC, Mac OS),
Ọ na-ekwe nkwa nchekwa nke arụmọrụ ntanetị (nnabata eIDAS, nyocha ihe 2)
Mbinye aka a tozuru etozu bụ ụzọ egosipụtara iji melite azụmahịa gị. Mpempe akwụkwọ elektrọnik bụ ugbua azụmahịa kwa ụbọchị.
(Biko jiri ekwentị kwadoo ụbọchị nzukọ)
Mara onwe gị
ozi ịntanetị: biuro@e-centrum.eu
Alaka dị na Gdynia
Officelọ ụlọ ọrụ GCB
Onye Nkwado Certum Onye Mmekọ
Webụsaịtị emere site na XWEB Otu | Ejikwa ya na IBS Poland Copyright © 2013 - 2020 IBS POLAND |Nzuzo
Anyị na-eji kuki na weebụsaịtị anyị iji nye gị ahụmịhe kachasị mkpa site na icheta mmasị gị na ikwugharị nleta. Site na ịpị “Nabata” ị kwenyere na iji kuki niile.
Ntọala kuki NABATA
Adreesị weebụsaịtị anyị bụ: https://mobilesignature.eu.
Iji nwee ike ịnye gị ihe agụmakwụkwọ kachasị mma ma nyere gị ezigbo aka ọrụ, anyị chọrọ nkwenye iji hazie ọdịnaya ahịa ka mma maka mkpa gị.
Anyị na-eche banyere nzuzo gị. Gị data dị nchebe na anyị ma ị nwere ike iwepu nkwenye gị n'oge ọ bụla.
Ozi gbasara data gị
Biko rụtụ aka na data ndị a:
Na Mee 25, 2018, Iwu (EU) 2016/679 nke Ndị Ome Iwu Europe na nke Council nke Eprel 27, 2016 na nchedo ndị mmadụ gbasara nhazi nke data onwe ha na ngagharị nke data dị otú ahụ, yana iweghachi 95/46 / EC (RODO, ORODO, GDPR ma ọ bụ Iwu Nchedo Data Izugbe
Iji gaa n'ihu na-enye gị ọrụ site na weebụsaịtị https://mobilesignature.eu/ anyị ga-achọ ịgwa gị maka nhazi data na iwu nke a ga-eme ya na Mee 25.
Kedu data anyị na-ahazi?
Achịkọtara data mgbe anyị na-eji weebụsaịtị anyị https://mobilesignature.eu/ , gụnyere echekwara na kuki.
Edemede dị na saịtị a nwere ike ịnwe ọdịnaya agbakwunyere (dịka ọmụmaatụ, vidiyo, eserese, isiokwu, wdg). Ihe agbakwunyere na weebụsaịtị ndị ọzọ na-eme omume dị ka a ga-asị na onye ọrụ ahụ gara na saịtị weebụ kpọmkwem.
Ihe agbakwunyere na weebụsaịtị sitere na weebụsaịtị ndị ọzọ
Saịtị nwere ike ịnakọta ozi gbasara gị, jiri kuki, jikọta sistemụ nsuso ụzọ mpụga, ma nyochaa ihe gị na ihe agbakwunyere mmekorita gị, gụnyere nsuso njikọ gị na ihe agbakwunyere ma ọ bụrụ na ị nwere akaụntụ ma banye na saịtị ahụ.
Isnye bụ onye njikwa data gị?
Onye nchịkwa nke data gị bụ IBS Poland Sp. Z. O. Na isi ụlọ ọrụ dị na Gdynia (81-350) na Plac Kaszubski 8/311, banyere Registerdebanye aha ndị ọchụnta ego n'okpuru nọmba KRS 0000471089, maka nke Court Court Gdańsk-Północ na-edebe faịlụ ndị debanyere aha | Ngalaba Azụmaahịa VII nke Courtlọ Ọrụ Mba, NIP 586-228-41-33 nwere isi obodo - ụgwọ a kwụrụ: PLN 50.
Kedu ebumnuche anyị chọrọ iji hazie data gị?
- Anyị na-edozi ọdịnaya gosipụtara na ibe anyị na mkpa ndị mmadụ n'otu n'otu ma na-emeziwanye ogo ọrụ nke enyere, site na iji nyocha nke data gị.
- Nhazi data na - enyere anyị aka ịbawanye nchekwa nke ọrụ enyere site na weebụsaịtị https://mobilesignature.eu/
Ogologo oge ole ka anyị ga-ahazi data ahụ?
Anyị na-ahazi data site n’oge inye nkwenye kwesịrị ekwesị ruo mgbe iwepu ya ma ọ bụ rịọ ka ọ kwụsị ịkwụsị data nkeonwe / rịọ maka iwepụ nhazi onwe onye nke onye nwe ya. Anyị na-ahazi data anakọtara dịka akụkụ nke ịre mgbe ị malitere iji websaịtị https://mobilesignature.eu/, i.e. mgbe ịbanye na weebụsaịtị anyị, ruo mgbe ị jụrụ ikwuputa.
Anyị enwere ike ịnyefe data?
Ebe nrụọrụ weebụ ahụ https://mobilesignature.eu/ na-enyefe data naanị na ndị nhazi na nnọchite ya (dịka ụlọ ọrụ mmepe ngwanrọ, na ụlọ ọrụ enyere ikike inweta ha n'okpuru iwu dị, dịka ụlọ ikpe. Agaghị ebufe data gị na mpụga mpaghara akụ na ụba Europe ma agaghị ekekọrịta ya òtù mba ụwa.
Whonye ka ị nwere ike ịkpọtụrụ maka ozi ndị ọzọ gbasara data a haziri?
Ọ bụrụ na ịnwere ajụjụ ọ bụla gbasara data nke gị, biko detara Onye nyocha Nkeonwe biuro@ibs-24.eu na ndetu "GDPR"
Ihe omume anyi:
A ga-atụkwasị akara ngosi RODO na mpempe ọrụ ọ bụla (dịka ọmụmaatụ kọntaktị, ikwu),
- Site na iji mpempe akwụkwọ, ị kwenyere na nchekwa na nhazi nke data gị site na saịtị ahụ.
-Nweta websaịtị bu ihe omuma
Kedu ihe bụ ikike gị gbasara data gị?
- I nwere ikike iji nweta data gị na ikike idozi, ihichapụ, belata nhazi, ikike ịnyefe data, ikike ịgbagha, ikike iji wepu nkwenye n'oge ọ bụla na-enweghị na-emetụtaghị iwu nke nhazi, nke emere na ndabere nke nkwenye tupu iwepụ ya . Enwere ike iwepu nkwenye ahụ site na izipu ozi ịntanetị na adreesị biuro@ibs-24.eu na adreesị nke nkwenye ahụ metụtara
- also nwekwara ikike itinye akwụkwọ mkpesa na GIODO ma ọ bụrụ na ịchọpụta na nhazi ozi gbasara gị na-emebi usoro nke iwu izugbe na nchekwa nke data onwe nke 27 Eprel 2016.
Kedụ ihe ndị kpatara iwu dị maka ịhazi data gị?
- https://mobilesignature.eu/ na-ahazi data gị na usoro iwu dabere na usoro iwu dị
- A na-akpọ ihe ndabere iwu maka ịgbakọ ọnụ ọgụgụ na azụmaahịa nke ya Ezi mmasị onye isi nchịkwa n'okpuru Art. 6 sekọnd 1 udo. F GDPR,
Weebụsaịtị eji kuki, faịlị faịlị ederede echekwara na kọmputa Onye ọrụ. Mmachibido iji kuki nwere ike imetụta ụfọdụ arụmọrụ dị na weebụsaịtị.
Kuki dị mkpa dị mkpa maka ebe nrụọrụ weebụ ka arụ ọrụ nke ọma. Otu a gụnyere naanị kuki na-ejide ọrụ na nchekwa nke weebụsaịtị ahụ. Kuki ndị a anaghị echekwa ozi gbasara onwe gị.
Ihe adịghị mkpa
Kuki ọ bụla na-enweghị mkpa maka weebụsaịtị iji rụọ ọrụ ma ejiri ya maka ịnakọta data nke onye ọrụ ahụ site na nchịkọta, mgbasa ozi, ọdịnaya ndị ọzọ agbakwunyere na-akpọ kuki ndị na-adịghị mkpa. Ọ bụ iwu iji nweta nkwenye ndị ọrụ tupu ị na-agba kuki ndị a na weebụsaịtị gị.